Nin ugu taajirsan dalka Shiinaha, Jack Ma, ayaa filaya in shaqaalihiisu ay shaqeeyaan saacadaha 72 usbuucii - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Ninka ugu taajirsan dalka Shiinaha, Jack Ma, ayaa filaya in shaqaalihiisu ay shaqeeyaan saacadaha 72 usbuucii
Jack Ma, aasaasihii Alibaba hambalyeeyay ushiisa dadaalkooda ku wareegsan jadwalka shaqada "996" dheehan shaqaalaha shaqeeyaan gelinba 12 saacadood, 9 21 saacadood saacadood, lix maalmood usbuucii. Waxay u egtahay ... wax qurux badan, ma aha?
Jack Ma wuxuu u hambalyeeyay shaqaalihiisa. Deynta: PA
MailOnline ayaa soo warisay in Mr. Ma uu ku soo bandhigay odhaahdan iyada oo la falanqeynayo maqnaanshaha shaqo-la'aanta ah ee ka dhex jira shaqaalaha sare ee Shiinaha.
Hadalka Mr. Ma Source: PA
Aynu xisaabtan ku sameyno halkan, waxaa jira saacado 168 wiiggii iyo saacadaha 72 lagu kharash gareeyn lahaa shaqada, si aad u aragto aragti, UK celcelis ahaan toddobaadkii shaqo waa saacadood 42, taas oo ah farqi weyn. I jeclahay laakiin hadda, waan socdaa.
Jack Ma wuxuu hadal u soo jeedinayaa "abaalmarinta Macalimiinta Jack Ma Rural Teacher" ee bisha Janaayo 2019. Deynta: PA
Sida laga soo xigtay MailOnline Mr Ma wuxuu ahaa ganacsade Shiinaha ah oo macalin hore oo Ingiriis ah oo halis ugu jirey dhaqaale ahaan markii uu ku qancay saaxiibbadiis inuu siiyo 60 000 dollars (45 000 £) si uu u bilaabo ganacsi. Shirkadda Shiinaha ee Ganacsiga.
Heerka Muuqaalka Sawirada: PA
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.ladbible.com/news/interesting-chinas-richest-man-jack-ma-expects-staff-to-work-72-hours-per-week-20190413
Youtube: WACS. Marseille-Nîmes: Dumarka ka mid ah ciyaartoyda labada kooxood ee sawirada ku leh